Akụkọ gam akporo: hapụ, akụkọ, asịrị na ndị ọzọ! | Gam akporo (Peeji nke 16)
Motorola chọkwara ịnwale akụkụ arụpụtaghị ihe na ekwentị ya yana maka nke ahụ, ọ nwere ike ịmalite Moto Mod dị ka Samsung DeX
OPPO Find X Lamborghini na-ere na sekọnd anọ
OPPO Find X Lamborghini na-ere na China na nanị sekọnd anọ. Chọpụta ihe banyere ihe ịga nke ọma nke nsụgharị nke ngwaọrụ a.
Enwere ike igosi Moto P30 ohuru na August 15
Motorola ga-eweta Moto P30s na August 15. Chọpụta ihe banyere ekwentị ọhụrụ a site na ika ahụ, nke ga-abata n'oge na-adịghị anya.
New Leaked Google Pixel 3 XL Video na-ekpughe atụmatụ ọhụrụ
E gosipụtara ọhụụ ọhụrụ nke Google Pixel 3 XL site na vidiyo aka, mara ọtụtụ nkọwa ọhụrụ nke ekwentị Google na-esote.
Samsung katọrọ Apple ọzọ na mgbasa ozi ọhụụ ya
Samsung na-ebo Apple ebubo ọzọ na mgbasa ozi ya. Chọpụta ihe banyere nkatọ ụlọ ọrụ Korea ji ọkwa ndị a banyere Galaxy Note 9.
Ekwentị 10 kachasị ike na July 2018, Dabere na AnTuTu Benchmark
AnTuTu na-ewetara anyị ọkwa nke 10 smartphones kachasị ike nke ọnwa July nke afọ a, nke Xiaomi Black Shark na ndị ọzọ nọ.
LITE: Xiaomi ohuru ohuru kachasi nma
LITT: akara ekwentị ọhụrụ nke Xiaomi. Choputa ihe banyere aha ohuru a nke ndi China guzobere taa.
Nkwụ ga-alaghachi na gam akporo yana ekwentị belata
Nkwụ ga ẹkedori a obere gam akporo ekwentị. Chọpụta ihe banyere ekwentị ọhụrụ nke ga-alaghachi n'ahịa.
Ike Ike Max P490 na P490S: batrị 4000mAh, gam akporo Go na ndị ọzọ
Energizer na-ewetara anyị Power Max P490 na P490S, ekwentị ọhụrụ abụọ batara nwere nnukwu batrị 4000mAh na gam akporo Oreo Go.
YI Home Camera Family Pack 2 na Nyocha 1
Anyị nwalere igwefoto ụlọ nke YI na mkpọ “ezinụlọ” 2-in-1 na-enye ọrụ na-atọ ụtọ, ngwa ọrụ kachasị mma iji nwee njikwa ihe niile.
Fortnite meghere ndebanye beta maka ngwaọrụ gam akporo dị iche iche. Mara nke kwekọrọ!
Egwuregwu Epic mepere ndebanye aha maka Fortnite beta maka ngwaọrụ dị iche iche. Anyị na-egosi gị ndepụta nke ekwentị dakọtara!
Oppo F9 enweela ụbọchị mmeghe: ọ ga-abụ August 15
Oppo ka kwuputara ụbọchị ntọhapụ maka Oppo F9. Nke a ga - abali n’abali iri n’ise n’onwa asato n’abia, oga abia na nke mbu na Philippines na Vietnam.
Samsung Galaxy Note 9 dị ugbu a na oroma
Samsung Galaxy Note 9 dịworị dị ka ihe dị n'usoro na oroma nke Spain na ụdị abụọ ya nke RAM na ROM.
Samsung Galaxy Rịba ama 9 na Samsung Galaxy Note 8
N'ime minit ole na ole, ụlọ ọrụ Korea nke Samsung ewepụtala Samsung Galaxy Note 9, njedebe kachasị ọhụrụ nke ụlọ ọrụ ahụ zubere. gosi ntule.
Huawei Mate 20 ga-enwe batrị 4.200 mAh
Huawei Mate 20 ga-enwe batrị 4.200 mAh. Chọpụta ihe banyere ọhụụ ọhụrụ dị elu nke akara ika China nke ga-abata na ọdịda a.
Mbadamba Alldocube X dị ugbu a na Indiegogo maka $ 219
Ahịa maka mbadamba, mgbe oge mbụ nke ndị nrụpụta niile kwalitere ụdị ha dị iche iche n'ahịa ahụ, belatara Mgbe izu ole na ole na-eche, Alldocube X dị ugbu a maka ndoputa site na ụlọ ọrụ igwe mmadụ na-enweta na Indiegogo
Snapdragon 670: Qualcomm ọhụrụ SoC elebere anya n'etiti etiti
Qualcomm na-enye Snapdragon 670, ihe nhazi ohuru nke na-abịa na nkọwa dịtụ ala karịa nke SD710 malitere n'oge na-adịghị anya
Nyochaa Aermoo B3 Bluetooth ekweisi
Anyị anwalela ekweisi Aermoo B3 dị egwu, na nyocha a, anyị ga-agwa gị data niile na ahụmịhe anyị maka ojiji maka ụbọchị ole na ole.
HTC dekọtara ịgba ụgwọ kachasị njọ n'ime afọ 15
Mgbanwe nke HTC dara 77% na July. Chọpụta ihe banyere mbelata nke ntụgharị nke ụlọ ọrụ Taiwanese.
Fosil ga-eweta smartwatches ọhụrụ ya na IFA 2018
Fosil ga-eweta smartwatch nke anọ ya na IFA 2018. Chọpụta ihe banyere elekere ọhụụ nke onye nrụpụta na-abịa n'oge adịghị anya.
Ihe onyonyo ohuru na data banyere PocoPhone F1
New nkọwapụta na leaked oyiyi banyere PocoPhone F1. Chọpụta ihe gbasara ekwentị site na akara ọhụrụ Xiaomi.
Smartisan Nut Pro 2S igbe na-ekpughe isi ihe ya
Akụkụ ndị bụ isi nke Smartisan Nut Pro 2S abiala na ìhè maka nkọwa nke igbe ya. Mara ha!
New oru nkọwa nke Leagoo S10 enen
Leagoo ayarade ọzọ banyere ya ọzọ ekwentị, na Leagoo S10. Ọ ga-abịa na ihuenyo AMOLED yana igwefoto azụ abụọ. Chọpụta!
Nzacha mbụ oyiyi nke Xiaomi Mi 8X
Xiaomi Mi 8X: Onye ohuru ohuru nke Mi Note nso. Chọpụta ihe banyere ekwentị a nke onyoonyo ha enwetala.
Enwere ike ịmalite ekwentị 2 Razer na mbubreyo 2018
Ihe ọhụrụ Razer ekwentị ga-amalite mgbe emechara afọ a. Chọpụta ihe banyere mwepụta nke ika ọhụrụ nlereanya maka njedebe nke afọ.
Onye OnePlus 6 ga - edozi nsogbu ihuenyo gị na nwelite ya ọzọ
A ga-ewepụta mmelite iji dozie nchapu ihuenyo nke OnePlus 6. Chọpụta karịa maka mmelite nke ndị nrụpụta China ga-ahapụ.
Asus Zenfone 5Z na-enweta ndozi dị iche iche na njirimara igwefoto na mmelite ọhụrụ
Asus Zenfone 5Z nke egosiri na njedebe nke February na MWC na Barcelona ka natara mmelite ọhụrụ na ndozi na ngalaba foto.
A ga-emepe Nokia 5.1 Plus n’oge na-adịghị anya n’ọtụtụ mba
Nokia 5.1 Plus ga-adị na mpụga China n'oge na-adịghị anya. Ngwaọrụ ahụ anatala asambodo Bluetooth. Anyị na-agbasawanye gị!
Motorola agaghị ahapụ Moto Mods
Motorola agaghị ahapụ mmepe nke Moto Mods. Chọpụta karịa gbasara nkwenye nke ụlọ ọrụ na ọ ga-aga n'ihu na-arụ ọrụ na Mods Mode.
Nkwupụta: a gaghị enwe ekwentị Moto Z ọzọ maka afọ a
Motorola ka kwupụtara na agaghị enwe ngwaọrụ Moto Z maka afọ a. A mara ọkwa nke a obere oge ka e gosipụtara Moto Z3.
Samsung ga - anọ na IFA 2018 nwere ngwaahịa ọhụrụ
Samsung ga-eweta ngwaahịa ọhụrụ na IFA 2018. Chọpụta ihe gbasara akwụkwọ ọhụụ nke ụlọ ọrụ ahụ ga-eweta na mmemme na Berlin.
A na-enyocha ọkwa nke HTC U12 Life, nke na-esote n'etiti akara ahụ
Ihe ngosi nke HTC U12 Life, onye na-esote ndị na-emepụta Taiwan na-esote n'etiti ekwentị, ka agbapụla. Mara ya!
Samsung weputara mmelite August maka Galaxy S8, S9 na Note 8
A tọhapụrụ ihe nche nche nke ọnwa a nke August maka Samsung Galaxy S8, S9 na Note 8.
Full Samsung Galaxy Rịba ama 9 Atụmatụ Leaked Tupu Unveiling
Nchịkọta nkọwa nke nkọwapụta nke nkọwapụta nke Samsung's Galaxy Note 9, nnukwu ekwentị a ga-ewepụta na-esote 9 na-abịa na ìhè Nkọwapụta teknụzụ nke Samsung Galaxy Note 9 ka amachara ụbọchị ole na ole tupu ngosipụta ya.
Oppo ga-abụ ụlọ ọrụ izizi ga-ewetara anyị ekwentị na Corning Gorilla Glass 6
Oppo ga-ewetara anyị mbụ ama na ahịa na Corning ozodimgba iko 6, dị ka nso nso a mara ọkwa.
Google Pixel 3 XL Leaks na GeekBench: A kpughere gam akporo P
Google Pixel 3 XL bụ ihe ọhụụ na Geekbench. Ngwaọrụ a na-etu ọnụ Android P, 4GB RAM na isi asatọ Qualcomm processor.
Oppo A3s: a mara ọkwa ọhụụ nke 3GB RAM + 32GB nke ebe nchekwa dị n'ime
Oppo ka kwupụtara ọkwa ọhụrụ nke Oppo A3s nwere nnukwu RAM na ikike nchekwa dị n'ime.
AUKEY na-enye "mgbe niile batrị na ekwentị"
Anyị anwalela ngwugwu AUKEY zuru oke ka batrị nke smartphones anyị nwee ike iguzogide ụdị ahụ n'oge ezumike ahụ, n'ezie otu n'ime ha ga-abịa kemfe.
Mụta maka atụmatụ nke Huawei's Mate 20 Lite mgbe ị gafesịrị TENAA
Huawei Mate 20 Lite gafere TENAA ma nweta asambodo ahụ. Ekele maka nke a, anyị amatalarị ụdị ọrụ ya. Anyị na-egosi gị!
Nyochaa GPS ọnụ ala Smartwatch Leo Sport Sp958. Ugbu a ekele maka ego ego. maka .56.75 XNUMX !!
Blackberry mepụtara X na megharia: ihe ohuru nke ụlọ ọrụ na-enweghị ahụ keyboard na gam akporo os
Izute Blackberry Evolve na Evolve X, ekwentị abụọ ọhụrụ sitere na ụlọ ọrụ America na sistemụ arụmọrụ gam akporo.
Wepụtara ụbọchị ngosi nke Xiaomi Mi MIX 3
A ga-enye Xiaomi Mi MIX 3 na September 15. Chọpụta ihe banyere ụbọchị ekwupụta ngosipụta nke ekwentị ndị China.
Mgbasa ozi ga-abata na WhatsApp na 2019
WhatsApp ga-ewebata mgbasa ozi na ngwa ahụ n'afọ ọzọ. Ndị ọkwa ọkwa ahụ ruru ngwa izipu ozi ahụ.
New Samsung Galaxy Tab S4: atụmatụ na ọnụahịa Mara ya!
Manufacturerwa kasị nwee ihe ịga nke ọma smartphone na-ewetara anyị ya mbadamba ọhụrụ. Anyị na-ekwu maka Samsung Galaxy Tab S4, onye nọchiri Galaxy Tab S3 Zute mbadamba Samsung ọhụrụ: Galaxy Tab S4. Nke a na-abịa na Snapdragon 835 SoC, nnukwu 10.5-inch SuperAMOLED ihuenyo, na ndị ọzọ.
Ozi ndi ozo banyere Huawei Mate 20 na Mate 20 Pro na-egosi
Enwetakwuola data site na Huawei Mate 20 na Mate 20 Pro, ha abụọ nwere igwefoto atọ
Nzube azụ nke Oppo F9 na-akwado igwefoto abụọ yana onye na-agụ mkpịsị aka
The Oppo F9 bụ ngwaọrụ ndị ọzọ ga - amalite site na ụlọ ọrụ China. Ndị a ekpughelarị ntakịrị ihe na ọkwa dị egwu n'oge Oppo F9 ekpugherela ya n'ikpeazụ site na akwụkwọ mmado ọhụụ abụọ. Nke a ga-abata n'ụdị agba abụọ: acha anụnụ anụnụ na ọbara ọbara.
Xiaomi bụ ụlọ ọrụ nwere uto kachasị elu na nkeji nke abụọ nke afọ a
Taa, otu n'ime ụdị ndị a ma ama na ahịa dị oke egwu bụ Xiaomi. Nke a emebeghị naanị iji nweta nkwanye ùgwù na mmasị nke Xiaomi, ọ bụ ụlọ ọrụ China nwere uto kachasị elu enwere n'etiti ọnwa Eprel na June nke afọ a. Anyị na-akọwa ozi ọma!
Oge ndoputa maka Oukitel K8 emehela
Ejiri ụlọ ọrụ Eshia Oukitel mara na afọ ndị na-adịbeghị anya site na ịmepụta igwe na atụmatụ ndị na-adọrọ mmasị na ọnụahịa karịa oge ndoputa maka Oukitel K8 dị ugbu a, ọnụ na ihe mmetụta ihe osise nke Sony na 5.000 mAh batrị rụpụtara.
Sony rere naanị nde ekwentị abụọ na nkeji nke abụọ nke afọ a
Otu ọnwa anọ agaala kemgbe ọnwa nke abụọ nke afọ ahụ sị anyị nọrọ nke ọma, na-erite uru ụfọdụ ndị na-emepụta smartphone ebe ndị ọzọ ka fọdụụrụ. Sony debara aha naanị nde abụọ e rere na nkeji nke abụọ nke afọ. Nke a na-anọchite anya ọdịda dị njọ. Chọpụta!
Facebook na Instagram na-ewebata mita ọrụ
Facebook na Instagram na-enye gị ohere ịlele otu ị si eji ha. Chọpụta ihe banyere atụmatụ ọhụrụ na-abịa na ngwa abụọ ahụ.
Huawei dị ka nke abụọ kachasị ere ahịa n'ụwa niile
Huawei karịrị Apple na ahịa na nkeji nke abụọ. Chọpụta ihe banyere ahịa ndị na-emepụta China na nkeji nke abụọ a n'ụwa niile.
Ekwentị 5G nke Huawei ga-eji sistemụ jụrụ dị elu
Naanị ọnwa ole na ole ka anyị ga-agba àmà 5G na teknụzụ dị iche iche. Ndị na-emepụta dị ka Huawei ekwupụtalarị na-adabere na mwepụta nke Huawei ga-eji sistemụ jụrụ oyi nke dabere na efere ọla kọpa iji kesaa okpomọkụ n'ihi oriri nke netwọk 5G.
Oppo VP gbara arụkwaghịm ka ọ bụrụ CEO nke Realme
Dị ka Honor na Huawei, na Nubia na ZTE, Oppo wetara Realme, enyemaka nke ụlọ ọrụ ahụ nwere onye isi ọhụụ ugbu a. Se Realme, nke a na - ahụ maka okpuru Oppo nke ewepụtara na Mee afọ a, emeela ka ọha mara ọkwa ọkwa onye isi ọhụụ ya. Anyị na-agbasapụrụ gị ozi ọma!
Echere na mbipụta Xiaomi Mi 8 Explorer gafere TENAA na ọkwa dị ala
Otu n'ime ngwaọrụ dọtara mmasị kachasị anya n'afọ a, ọ bụghị nke ukwuu maka àgwà ya ma ọ bụ uru ya, mana maka imepụta ya na-esote Xiaomi edebanyela ngwaọrụ na TENAA. Dabere na data enyere, ọ nwere ike ịbụ ụdị nke mbipụta Mi 8 Explorer.
A na-ewepụta ọtụtụ nkọwapụta ọrụ aka nke Huawei Mate 20 ekele maka ngwa ngwa ya
Ka ụbọchị na-aga, a na-ewepụta nkọwa ụfọdụ gbasara ọkọlọtọ ndị ọzọ nke ụlọ ọrụ China bụ Huawei, ụfọdụ dabere na ngwa ngwa nke Huawei Mate 20 abanyela elekere ole na ole gara aga. Mara ihe omuma oru nile ekpughere!
Netwọk 5G bụ otu n'ime teknụzụ njikọ a na-atụ anya na ekwentị, ebe ọ bụ na, dị ka anyị maara nke ọma, a kwadobeghị ya ebe ọ bụla.Dị ka nkwupụta nke osote onye isi ụlọ ọrụ ahụ, Chang Cheng nyere, Lenovo ga-ewetara anyị 5G mbụ. ekwentị na Snapdragon 855.
Ọhụrụ sitere na enyemaka Huawei dị ebe a. Anyị na-ekwu maka Honor Rịba ama 10, na-adịbeghị anya ọkọnọ phablet na a nnukwu ihuenyo na-emetụ 7 The Honor Note 10 bụ ugbu a ukara. Mụtakwuo maka ama ọhụụ nke ụlọ ọrụ nwere nnukwu ihuenyo AMOLED 6.95-inch na Kirin 970.
Izu ole na ole gara aga, anyị kwuru banyere mbadamba nkume ọhụrụ nke na-achọ ịhụ ìhè, Alldocube X, a ...
Qualcomm malitere imepụta otutu nke Snapdragon 855
Qualcomm amaliteworị imepụta Snapdragon 855. Chọpụta karịa maka mmalite nke imepụta igwe nke processor.
Xiaomi na-arụkwa ọrụ na ekwentị nke ọ nwere ike ịpị
Xiaomi na-arụ ọrụ na nke ya mpịachi ama. Chọpụta karịa maka atụmatụ ndị China ga-ebido ụdị mpịachi a n'afọ ọzọ.
Sony Xperia XZ3 kọrọ na gosipụtara na TENAA
Sony nwere ike iweta Xperia XZ3 na IFA dị na Berlin, Germany, ngosi ngosi teknụzụ ama ama ebe a na-egosiputa ngwaọrụ ọhụụ. Mụtakwuo maka ngwaọrụ a!
Samsung Galaxy A (2019) ga - enwe igwefoto atọ
Samsung ga-ewebata igwefoto atọ azụ na Galaxy A (2019). Chọpụta ihe ndị ọzọ gbasara njirimara nke ekwentị ndị a sitere n'aka ndị nrụpụta.
Xiaomi Pocophone F1 na-ekpughe ụfọdụ nkọwa mgbe asambodo Bluetooth ya
Ọtụtụ asịrị banyere Xiaomi na-esote njedebe. Ngwaọrụ a, Pocophone F1, emeela nleta na Bluetooth SIG, nke Xiaomi Pocophone F1 na-agafe na Bluetooth SIG ma kwenye. Mụtakwuo maka nkọwapụta nke nkọwapụta ọkwa dị elu na-esote na Snapdragon 845.
Enwere ike Kirin 980 na August 31
A ga-ewepụta Kirin 980 na Ọgọstụ 31 na IFA 2018. Chọpụta karịa maka ụbọchị ngosipụta ga-ekwe omume nke Huawei's high-end processor.
Enwere ike ịchekwa Honor Note 10 na China
Na-ekpughere nkọwa ndị ọrụ gọọmentị nke Honor Note 10. Chọpụta ihe banyere ọhụụ ọhụrụ dị elu nke akara ndị China nke na-abịa n'izu na-abịa.
Ihe ngosi Honor 10 ga-enwe batrị 5.000 mAh
Ihe ngosi Honor 10 ga - egosipụta batrị 5.000 mAh. Chọpụta karịa batrị nke ekwentị ọhụrụ sitere n'aka ndị nrụpụta China ga-enwe.
Mysterious Oppo na-agbapu na weebụ. Ọ ga - abụ R17?
Edebanyela aha ọhụrụ abụọ nke nke Oppo na nchekwa data TENAA n'okpuru aha aha koodu PBCM00 na PBCT00. Ọ bụ ezie na ngwaọrụ Oppo ọhụrụ abụọ na-adịbeghị anya abanyela n'ime nchekwa data TENAA. Asịrị ekwuolarị na ọ nwere ike ịbụ R17.
OPPO Find X na-enweta ule ntachi obi kachasị ama
OPPO Find X dara ule nnagide JerryRig. Ọ na-enweta ule a maara nke ọma na nsonaazụ adịghị mma na ekwentị.
Oppo R17 Pro ga - abụ ekwentị izizi nwere 10GB RAM
Ọtụtụ ọnwa gara aga, na Jenụwarị kpọmkwem, ndokwa mbata nke Vivo mobile na 10GB nke RAM nchekwa ka a nụrụ maka njedebe nke afọ: XPlay 7. Oppo ga-akwadebe ihe niile iji mepụta ihe omume nke a ga-ewepụta Oppo. R17 Pro, mobile mbụ nwere 10GB RAM na ahịa.
Nyochaa YI smartphone gimbal
Anyị nwalere gụrụ ihe ngosi YI, ngwaọrụ iji mee ka vidiyo vidiyo gị kwụsie ike n'ọnọdụ niile. Ọ na-ewepụta ihe o kwere ná nkwa?
TENAA kwenyere na Meizu 16 ga-abịa na ihe mkpịsị aka mkpịsị aka arụkọtara na ihu
N'oge na-adịghị anya anyị ga-ahụ ihe ngosi nke Meizu 16, ọkọlọtọ na-esote nke ụlọ ọrụ China nke ga-abata n'ọnwa August a na-abịa iji nye TENAA ka gosipụtara ọnụnọ nke akara mkpisiaka n'okpuru ihuenyo na Meizu 16. Anyị gbasaa gị!
Huawei guzobere onwe ya dịka akara kacha ere ahịa na China
Huawei na-abawanye ahịa ya ma na-akwado onwe ya dị ka onye na-ere ahịa kacha mma na China. Chọpụta karịa ahịa ndị ahịa na mba gị.
Google Play machibidoro ad-juputara, oyiri na ngwanrọ ngwuputa ngwa ahia
Google Play gbanwere iwu mbipụta ngwa. Chọpụta karịa banyere mgbanwe a na-ewebata na ngwa ngwa.
A ZTE mobile n'okpuru koodu aha A0722 nwetara asambodo nke TENAA
Agbanyeghị esemokwu ZTE na United States na nso nso a, ụlọ ọrụ China anaghị akwụsị ọrụ ya na mba ofesi, yana obere mba ya. Agbanyeghị, edebanyela ngwaọrụ ZTE ọhụrụ na nchekwa data TENAA n'okpuru akara ngosi A0722. Mụtakwuo banyere nkọwapụta ọrụaka ya.
ZTE nwere ike ịgbanwe aha ya ka ọ rụọ ọrụ na United States
ZTE nwere ike ịmanye ịgbanwe aha ya ịlaghachi n'ọrụ. Chọpụta ihe banyere ọnọdụ ndị etinyere na ụlọ ọrụ ndị America.
Huawei P Smart +: nke ọhụrụ site na ụlọ ọrụ nwere igwefoto anọ na Snapdragon 710
Huawei ka webatara P Smart +, ekwentị ọhụrụ emere maka ndị hụrụ foto n'anya. Ngwaọrụ a nwere ụfọdụ atụmatụ Huawei wetara anyị P Smart +, akara ọhụụ ọhụụ nwere ese foto anọ yana Qualcomm Snapdragon 710.
Nwere ike ịkekọrịta Akụkọ Instagram na onye ọ bụla ịchọrọ iji mmado ọhụrụ
Instagram eweputala ihe mmado ohuru nke ga - enyere gi aka ịhọrọ onye ga - ahuta Akụkọ Instagram nke ị buliri na akaụntụ netwọkụ gị.
Njirimara njirimara nke Motorola One Power mgbe ha gabigara TENAA
Motorola, ụlọ ọrụ nke Lenovo nwetara afọ ole na ole gara aga, na-achọ iwebata anyị na ngwaọrụ ọhụrụ: Motorola One Power, nke dị n'etiti etiti Motorola One Power ka TENAA gbaara. Mụtakwuo maka nkọwa gọọmentị nke ngwaọrụ a dị n'etiti.
Egwuregwu egwu ibe !!
Sony Xperia XZ3 nwere ike ibute ya na ihe mmetụta 48MP
Abọchị ole na ole gara aga, Sony, ụlọ ọrụ Japan, gosipụtara ihe mmetụta ọhụụ dị ọhụrụ megapixel 48. A bịara mara nke a dịka Sony IMX586. Ngwaọrụ nke Sony pụtara na GFXBench. Nke a nwere ike ịbụ Sony Xperia XZ3, ụlọ ọrụ na-esote flagship.
HTC U12 Life: isi data nke njedebe ọzọ nke ụlọ ọrụ ahụ ka edozi
O yiri ka HTC ọ na-eguzobe onwe ya ọtụtụ ihe ma ọ bụ, kama, naanị na usoro U12 ya kemgbe, n'oge na-adịbeghị anya, data dị mkpa nke ngwaọrụ ya ọzọ abanyela. , na-leaked.
Moto C2 na C2 Plus ekwenyelarị
Moto C2 na C2 Plus agbaala akwụkwọ na Brazil. Chọpụta karịa banyere ụdị ọhụrụ nke ika ga-ada n'ahịa n'oge na-adịghị anya.
Xiaomi kwadoro na a gaghị enwe Xiaomi Mi Max 3 Pro
Ọ bụ ọrụ: Xiaomi Mi Max 3 Pro agaghị ebupụta. Mgbe ụbọchị ole na ole jiri ọtụtụ asịrị, anyị enweela nkwenye na ekwentị.
Ulefone Armor 5, ngwa siri ike nke nwere ọkwa, ka ekwuputara na ọkwa
Ulefone ka kwupụtara Armor 5, igwe siri ike nke ga-abata na ihe ọhụụ anaghị ahụ tupu ngwaọrụ ndị na-eguzogide usoro a: a ka ekwuputala Ulefone Armor 5 maka August 6, ụbọchị ọ ga-abụ eze malitere na ahịa Europe.
Xiaomi Redmi Rịba ama 5: ụdị ọhụrụ 6GB + 128GB abịarute
Xiaomi, n'ihi ihe ịga nke ọma nke Redmi Note 5 kwalitere na nso nso a enwetala, wetara anyị ụdị ọhụrụ na 6GB RAM na 128GB nke ROM ebe nchekwa.
LG edebanyela aha LG V90
LG ga-ebuputa ma ọ dịkarịa ala ọgbọ ise nke LG V. Chọpụta ihe banyere ndebanye LG V90 site na ụlọ ọrụ Korea
Samsung bụ okpueze dịka onye kacha ere ahịa na India
Samsung bụ ahịa kachasị ere na India na nkeji nke abụọ. Chọpụta karịa ahịa nke akara Korea na ọnwa atọ a.
Sony Xperia XZ3 nwere ike ịnwe otu igwefoto
Sony Xperia XZ3 ga-enwe otu igwefoto dị ka a hụrụ na nsụgharị ya. Chọpụta atụmatụ nke ekwentị na ọnụnọ nke otu igwefoto.
Samsung malitere site na mmepe nke GPU nke ya maka mobiles ya di elu
Samsung enweworị injinia na-arụ ọrụ maka NVIDIA na-arụpụta mgbapụta GPU nke ya. A GPU nke anyị ga-ahụ na Exynos.
Meizu 16 na 16 Plus gafere TENAA: ekpughere atụmatụ ndị isi
Meizu 16 na 16 Plus, duo ndị na-esote ụlọ ọrụ China, ka gosipụtara n'oge na-adịbeghị anya na TENAA, onye nyocha China, na ọkọlọtọ Meizu na-esote, Meizu 16 na 16 Plus, ka batara na TENAA tinyere ya isi njirimara. Mara ha!
PUBG Mobile melite na mbipute 0.7.0 ugbu a: ọnọdụ agha ọhụụ na ndụ na-enweghị ngwụcha
Ndụ na-adịghị agwụ agwụ na-echere gị na PUBG Mobile ọhụụ ọhụụ nke rutere taa na mmelite gaa na mbipute 0.7.0.
Wezugara nkọwa nke Pocophone F1
Wepụtara nkọwa ndị mbụ nke Pocophone F1. Choputa ihe banyere ekwenti ohuru nke Xiaomi nke anyi mara ugbua.
Samsung ga-arụ ọrụ na smartphone egwuregwu
Asịrị: Samsung na-emepe emepe ama egwuregwu ya. Chọpụta ihe ndị ọzọ banyere ịdị adị nke ekwentị a site na ụlọ ọrụ Korea.
A na-ekpughe ọnụahịa 9 Galaxy Note na Europe
Anyị enweela ọnụahịa nke 9 Galaxy Note na Europe. Chọpụta ọnụahịa nke ụdị abụọ nke Samsung dị elu ga-enwe.
Achọpụtara Xiaomi Mi Max 3 Pro na ntanetị
Xiaomi Mi Max 3 Pro na-egosi na weebụsaịtị Qualcomm. Choputa ihe banyere ekwenti Xiaomi nke amaghi ma odi ma obu adighi.
Honor Note 10 ka TENAA gbaara na 512GB nke nchekwa dị n'ime
Ka ụbọchị mbido nke Honor Note 10 na-abịaru nso, anyị amatalarị banyere njirimara na nkọwapụta nke nkọwa a The Honor Note 10 agabigala TENAA, onye nyocha nke China na onye na-achịkwa, yana ihe dịka 512GB nke ebe nchekwa dị n'ime ya na nnukwu 5.95-anụ ọhịa AMOLED ihuenyo.
New leaked atụmatụ nke Huawei's Kirin 980
Ka ụbọchị na-aga, asịrị banyere processor Huawei na-esote na-abawanye, na-enye anyị ọtụtụ data nke ụfọdụ edepụtara ọhụrụ atụmatụ nke Kirin 980 na-ekpughe na a ga-akwado SoC a na cores anọ 77GHz Cortex-A2.8 na ndị ọzọ. . Anyị na-agbasawanye gị!
Huawei Mate 20 Lite nwere ike ị bịa n'ụdị abụọ
Dị ka Huawei, ụlọ ọrụ China, na-esokarị ọkọlọtọ ya na ụdị nke ha, oge a ọ ga-ewetara anyị ụdị Huawei Hou Mate 20 Lite ga-erute n'ahịa ụwa niile n'ụdị abụọ dị iche iche nke ọnọdụ nke akara aka na-agbanwe. .
Nwere ike duo na vidiyo site na Duo site na Google Assistant
Onye na enyere Google aka tinyebe iwu olu ohuru nke ị nwere ike iji kpoo oku site na iji olu gi.
Ihe ngosi ohuru nke LG V40 ThinQ kpughere
LG V40 ThinQ: Nkọwapụta ọhụrụ Leaked. Choputa ihe banyere onodu ohuru ohuru site na ulo oru Korea nke ekwuputara na Septemba.
Ihe ngosi 9 Galaxy Note ga - enwe batrị 4.000 mAh
Batrị nke Samsung Galaxy Note 9 ga-abụ 4.000 mAh. Chọpụta ihe banyere batrị nke akara elu nke akara Korea ga-enwe.
Nokia 5.1 Plus na-amalite na mpụga nke China n'oge na-adịghị anya
Nokia 5.1 Plus ga-ebupụta na ahịa ọhụrụ n'oge na-adịghị anya. Chọpụta ihe banyere mwepụta nke etiti etiti na mpụga China nke ga-eme n'oge na-adịghị anya.
Asus ZenFone Max Pro M1 nwere 6GB RAM ga-ahapụ ya na July 26
Asus, ebe o webatara ZenFone Max Pro M1 na 3 na 4GB nke RAM, na-ewetara anyị ụdị ọhụrụ nke ikike RAM buru ibu. Nke a, Asus ka kwuputara na 1GB RAM ZenFone Max Pro M6 ga-ere na India na July 26 a n'okpuru ọnụahịa Rs 14.990.
A ga-ewetara Honor Note 10 na July 31
A ga-ekpughere Honor Note 10 na July 31. Chọpụta ihe banyere ụbọchị ngosi nke isi nke akara ndị China.
Emeputara OnePlus 3 na 3T nke July
OnePlus eweputara mmelite ọhụrụ na OnePlus 3 na 3T, ọkọlọtọ abụọ nke afọ nna nna ụlọ ọrụ ahụ, nke na-abịa na ngwungwu OnePlus ewepụtala nchedo nchedo dabara na ọnwa Julaị maka OnePlus 3 na 3T yana ọtụtụ obere ndozi. .
Sony Xperia XZ2 Premium ga-abata na Europe na njedebe nke ọnwa Septemba
Xperia XZ2 Premium ga-abata na Europe na njedebe nke ọnwa Septemba. Chọpụta karịa maka mbido elu Sony dị na Europe.
Sharp malitere Aquos C10 na Aquos B10 na Europe
Sharp emeela Aquos C10 na Aquos B10 onye isi, mobiles ọhụrụ abụọ dị iche na ngalaba na edemede niile, ebe ọ bụ njikọta na-eme ka ha dị n'otu naanị Sharp amalitela Aquos C10 na Aquos B10, ekwentị abụọ ọhụrụ nke ụlọ ọrụ na Ha bụ lekwasịrị anya n'ahịa ndị Europe.
Nokia 5.1 Plus na-ere ahịa na ụbọchị mbụ ya na ire
Nokia 5.1 Plus na-ere ahịa n'ime awa 24 na ire ere na China. Chọpụta ihe banyere ika n'etiti-nso ahịa na China.
A nche ezu-abịa WhatsApp: nchọpụta nke-enyo anyị enyo njikọ na-akọrọ kọntaktị gị chat window.
Samsung SIG gam akporo Samsung kwadoro ya
A nụwo ọtụtụ ihe banyere Samsung mbụ gam akporo Go, na ọ bụ na, mgbe ọtụtụ ekwentị nwere usoro a abanyela n'ahịa, mbata nke Samsung mbụ na gam akporo Go, sistemụ arụmọrụ dabere na gam akporo, na-esiwanye ike. Oreo emebere maka ekwentị mkpirisi ala.
Nokia 6.1 Plus ga-aga ire ere n'ọtụtụ mba n'oge ọkọchị a
Nokia 6.1 Plus ga-abata na mba ọhụrụ n'oge ọkọchị a. Chọpụtakwuo banyere mbido n'etiti Nokia na ahịa ọhụrụ.
A ga-ewepụta Huawei's Kirin 980 na IFA na Berlin na Septemba
Huawei, n'etiti ọtụtụ ngosipụta nke ọ rụrụ ụnyaahụ, nwere ike na-eweta HiSilicon Kirin 980, onye nhazi ọzọ nke HiSilicon Kirin 980 nwere ike iweta na IFA na Berlin na Septemba dịka ihe asịrị ahụ si kwuo. Anyị na-agbasawanye gị!
A ga-ekpughe ọkà okwu amamihe nke Samsung na Bixby na August
Samsung ga-ekpughere ya ọkà okwu nwere ọgụgụ isi na Bixby na August 9. Chọpụta ihe banyere mbata igwe okwu nke ụlọ ọrụ na ahịa.
A ga-ewetara Honor Note 10 na IFA 2018
A ga-ewepụta Ntuziaka Honor 10 na August 30 na IFA 2018. Chọpụta ihe banyere ngosipụta nke nsọpụrụ dị elu na August.
Huawei erewo 100 nde ekwentị ugbu a na 2018
Huawei eruola nde 100 ekwentị rere. Chọpụta ihe gbasara ahịa ndị China nke afọ a.
Otu esi emepụta gif na-enweghị mkpa ngwa
E gosipụtara Huawei Nova 3i. Mụta ihe niile banyere mobile mbụ na Kirin 710!
Na mgbakwunye na ibupụta Nova 3, ọhụụ ọhụrụ nke ụlọ ọrụ ahụ nke nwere Kirin 970 SoC, Huawei kwupụtara Nova 3i, nke dị n'etiti etiti na Huawei Nova 3i ka ekpughere yana atụmatụ na nkọwa ya niile. usoro. Anyị na-enye gị nkọwa gbasara ngwaọrụ a!
Wepu ego nke Xiaomi Mi A2
Filters ikpeazụ ụgwọ nke Xiaomi Mi A2 tupu ya ngosi. Chọpụta karịa maka ọnụahịa ndị gam akporo Otu ekwentị ga-enwe.
Sony Xperia XZ3 na-ekpuchita ihe ngosi tupu ngosi ya
Leaked Sony Xperia XZ3 otu ọnwa tupu ngosi ya. Chọpụta ihe banyere ekwentị ọhụrụ ahụ site na akara Japanese nke ga-abata na IFA 2018.
Nokia X5 bụ kọmịshọn nwere akara ngosi mara mma yana kamera azụ abụọ
Nokia wetaara anyị ngwaọrụ ọhụụ. Ọ bụ Nokia X5, ọnụ ya nwere ọkwa na nkọwapụta ya, ọ bụ ezie na ọ dịtụ ntakịrị karịa Nokia X5. Anyị na-ewetara njirimara niile na nkọwapụta teknụzụ ọhụụ ọhụrụ a kwalitere taa.
N’oge na-adịghị anya ị ga-enwe ike iwepụ ndị na-eso ụzọ na akaụntụ Instagram gị
N’oge na-adịghị anya ị ga-enwe ike ihichapụ ndị na-eso ụzọ na akaụntụ ọha gị ka ịdebe akaụntụ gị nke ọma ma ghara ime ya nzuzo.
Alto's Odyssey dị na Storelọ Ahịa Play malite na July 26
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ọkachasị ụlọ ọrụ nnwere onwe, ahọrọghị ịmalite egwuregwu ha ma ọ bụ ngwa ha n'ime usoro okike gam akporo, n'ihi egwuregwu ọhụrụ nke Alto skier, Alto's Odyssey ga-akụ Play Store na July 26 ma ọ ga-enwere n'efu na ngwa ịzụrụ na mgbasa ozi
Helio A22: MediaTek ọhụrụ nhazi usoro
Helio A22: Ihe oru ohuru MediaTek bu ugbu a. Chọpụta ihe gbasara ihe nhazi ọhụụ maka akara maka ọkara dị n'etiti
Abụọ ọhụrụ Vivo mobiles ka agbapụtara na TENAA
Vivo yiri ka ọ nwere ebe ọhụụ ọhụụ abụọ dị njikere. Ndị a bụ Vivo V1732BA na V1732BT, ekwentị ọhụrụ nke ụlọ ọrụ ahụ nwere ngwaọrụ abụọ Vivo ka edochara na weebụsaịtị TENAA, onye nyocha China nke ekwentị ndị a ga-eresị na China gafere.
Sony kwenyesiri ike na ha ga-eweta ekwentị ọhụrụ na IFA 2018
Sony ga-ekpughe ekwentị ọhụrụ na IFA 2018. Chọpụta karịa gbasara nkwenye nke ụlọ ọrụ na ekwentị ha nwere ike iwebata.
Ọ bụrụ na ịchefu emojis gam akporo, ịnwere ike ịnwe ha na gam akporo Gboard na Ozi
Gboard na ozi gam akporo na-enye anyị ohere ịnweta emojis gam akporo mara site na blọgụ ọzọ. Ha efuola kemgbe Allo kagburu.
Vivo Y71i, ika ọhụrụ 6-anụ ọhịa FullView ihuenyo
Ọnwa ole na ole gara aga, n'ọnwa Eprel, Vivo malitere Vivo Y71 n'ahịa ndị India dị ka ekwentị na-ajụ ajụ nke Vivo Y71i pụtara kwụpụta na mpaghara 6-inch diagonal FullView HD + n'ahịa ndị India. Yana ọnụ ahịa akụ na ụba. Anyị na-ewetara gị ya!
Otu ule ịgba ọsọ nke Meizu 16 pụtara ìhè
Ihe akara akara nke Meizu 16 abanyela na ntanetị tupu mbido ọrụ ekwentị na ọnwa na-abịa. The leaked image A chere ọsọ ule nke Meizu 16 na a Qualcomm Snapdragon 845 mgbawa e leaked na net. Anyị na-agbasapụrụ gị ozi ọma!
Onyinye Primebọchị Pụrụ Iche pụrụ iche nke 2018. Emelitere na onyinye ụbọchị !!
Kwadoro na onyinye ụbọchị 17 !! Na oge nke ụbọchị mbu nke 2018, emume nke Amazon na-enye ma mbelata ego maka ndị ahịa ya, na Onyinye Pụrụ Iche nke Oge 2018. Emelitere na onyinye ụbọchị !! echefula onyinye dị egwu anyị họpụtara maka gị.
Huawei wepụtara EMUI 8.1 maka Nwunye 10 na Mate 10 Pro
Izu ole na ole gara aga, Huawei kwupụtara na Mate 10 na Mate 10 Pro ga-enweta EMUI 8.1 n'okpuru gam akporo 8.1 Oreo n'etiti ọnwa a. Ugbu a, Huawei ekwuputalarị wepụtara EMUI 8.1, usoro nhazi nke kachasị ọhụrụ ya, n'okpuru gam akporo 8.1 Oreo maka Mate 10 na Mate 10 Pro.
Samsung ọhụrụ-ọkwa-ga-enwe iris nyocha
Samsung ga-ewebata onye gụrụ ya iris na ọhụrụ njedebe. Chọpụta maka atụmatụ ụlọ ọrụ jiri ndị na-agụ iris na ekwentị ndị ọzọ.
Nkwekọrịta: ZTE ga-arụ ọrụ na United States n'okpuru ọnọdụ dị iche iche
Fewbọchị ole na ole gara aga, anyị gwara gị banyere njedebe nke nsogbu ZTE na Ngalaba Azụmaahịa United States. Ọfọn, nke a bụ ihe ọzọ, ZTE nwere ike ịga n'ihu na-azụ ahịa na United States, mana ọ bụghị na-enweghị ọtụtụ nkwekọrịta nkwekọrịta. Anyị na-agbasapụrụ gị ozi ọma!
Vivo NEX S na-anwale nnwale ntachi obi kachasị ama
Vivo NEX S na-anwale ule ntachi obi JerryRigEverything. Choputa ihe banyere ule ntachi obi nke enyere Vivo elu.
Na Eprel, Oppo weputara A3, ọnụ ya nwere nkọwapụta dị n'etiti ihe eji eme ihe na-echetara anyị ọtụtụ flagship nke ugbu a nke anyị na-ewetara gị Oppo A3s, ama ọhụụ ọhụụ nke ụlọ ọrụ China nke dịlarị maka ọrịre na India.
Enwere ike ịmalite Xiaomi Mi 8 Explorer mbipụta na July 24
Xiaomi Mi 8 Explorer Edition ga-ebido na July 24. Chọpụta ihe banyere ọbịbịa dị elu nke ahịa na-abịa n'izu na-abịa.
Nokia 5.1 Plus na-enweta ụbọchị ngosi ọhụụ
Enwere ike igosi Nokia 5.1 Plus na July 17. Chọpụta karịa maka ụbọchị ngosipụta Nokia n'etiti Nokia.
Wepụtara ụfọdụ nkọwa nke Xiaomi Mi Max 3
Xiaomi Mi Max 3: Nkọwapụta mbụ leaked. Chọpụta ihe banyere nkọwa mbụ nke sitere na Xiaomi phablet,
OPPO weputara igwe ohuru iri ano na Europe
OPPO ga-ewepụta ngụkọta nke ekwentị ọhụrụ 40 na Europe. Chọpụta ihe banyere atụmatụ ndị nrụpụta nke China wepụtara ụdị ọhụrụ na Europe.
Ogwe igodo ala na Twitter dị ugbu a na ọkwa
Nwere ike iji Twitter jiri otu aka site na ịnwe mmanya igodo na ngwa maka ngwaọrụ gam akporo na ala.
The Honor 10 akanyam nde ato ato n’uwa nile
The Honor 10 ereworị ihe karịrị nde 3. Chọpụta ihe banyere ihe ịga nke ọma nke ekwentị sitere n'aka onye nrụpụta Honor na-enwe gburugburu ụwa.
Samsung nwere ike igosi Galaxy Watch na IFA 2018
Enwere ike igosi Samsung Galaxy Watch na IFA 2018. Chọpụta ihe banyere ụbọchị ngosi nke elekere ụlọ ọrụ Korea.
Nzacha ọhụrụ Xiaomi Mi A2 Lite
Xiaomi Mi A2 Lite: ekwentị Xiaomi ọhụrụ na gam akporo One. Chọpụta ekwentị ọhụrụ a site na akara ndị China nke ga-eso Mi A2.
Ihe ngosi 9 dị na Galaxy ga-aga ahịa na August 24
Samsung Galaxy Note 9 ga-aga ere na August 24. Chọpụta ihe banyere ụbọchị mwepụta nke ekwentị Korea.
Nwere ike iji igwe satịlaịtị nke Google Maps dị na gam akporo Auto na ngwa ụgbọ ala gị
Ọ bụrụ na ịnwere ụgbọ ala ejiri gam akporo Auto arụnyere na sistemụ ụgbọala, ịnwere ike iji echiche satịlaịtị nke Google Maps.
Lenovo S5 nyochaa
Lenovo S5, agụụ na-acha ọbara ọbara bụ ebe a iji nọrọ na etiti gam akporo. 13 + 13 Mpx igwefoto abụọ, ihuenyo 5,7 na batrị 3.000
E yigharịrị ngosi nke Nokia 5.1 Plus
A kagburu ihe ngosi Nokia 5.1 Plus. Chọpụta ihe banyere kagbuo ihe omume a nke pụtara na anyị ga-echere ịmara nọmba ekwentị.
Xiaomi ga-emeghe ụlọ ahịa na Zaragoza na July 14
Xiaomi kwuputara mmeghe nke ụlọ ahịa ya na Zaragoza na July 14. Choputa ihe banyere ahia ahia ohuru nke China na Spain.
Etu esi ajụ ajụjụ na Akụkọ gbasara Instagram: nnukwu akwụkwọ ọhụụ nke Instagram
Instagram ka mere ọbịbịa nke ajụjụ na Instagram Akụkọ gọọmentị. Can nwere ike iji mmado ajụjụ ahụ mee ha.
Google Pay ugbua na-enye nkwado maka ịbanye na tiketi tiketi
Ọtụtụ ọnwa mgbe e gosipụtara ya, ndị ọrụ Google Pay nwere ike iji nyiwe a tinye akwụkwọ ikike ịbanye na tiketi egwu anyị.
E kpughere ihe osise mbụ nke 9 Galaxy Note
E kpughere ihe ngosi nke 9 Galaxy Note na mbụ osise ya. Chọpụta ihe banyere onyonyo izizi nke Samsung ọhụrụ dị elu.
Nokia 5.1 Plus agbagọla: Ihuenyo nwere igwe ojii na igwefoto abụọ
Weputara usoro zuru ezu nke Nokia 5.1 Plus tupu ya ewepụta ya. Choputa ihe banyere Nokia n’etiti.
Nubia Z18 na-egosi na Geekbench tinyere isi okwu ya
Nubia, enyemaka nke ZTE, o yiri ka ọ ga-enwe ọhụụ ọzọ. Nke a bụ Nubia Z18, njedebe dị elu na ụfọdụ nkọwapụta teknụzụ nke Nubia Z18 mere na nso nso a na Geekbench, na-ahapụ anyị ụfọdụ eziokwu mara mma gbasara nkọwa ya dị mkpa. Chọpụta!
Spotify na - enye gị ohere idozi egwu na listi ọkpụkpọ site na gam akporo gam akporo gị
Site taa na gam akporo ị nwere ike ịgbanwe usoro nke egwu dị na ndepụta Spotify. Ihe ọhụụ maka Google OS.
Huaweidị Huawei asaa na-anata EMUI 8.0 dabere na gam akporo 8.0 Oreo
Huawei kwuru na nso nso a na ntọhapụ nke mmelite maka ụdị asaa ga-eweta EMUI 8.0 dabere na gam akporo 8.0 Oreo. Huawei kwupụtara na 7 nke ụdị ya ga-enweta EMUI 8 dabere na gam akporo 8.0 Oreo. Anyị na-agbasapụrụ gị ozi ọma!
Xiaomi na-arụ ọrụ na ekwentị ọhụrụ dị elu
Pocophone: akara ohuru nke Xiaomi maka India. Chọpụta ihe maka ụdị Xiaomi a iji malite ekwentị na India.
Ekwentị 10 kachasị ike nke June 2018, Dabere na AnTuTu Benchmark
Otu n’ime akara ngosi ama ama ama ama ama na ama gam akporo na Android bụ ihe ịrụ ụka adịghị ya na AnTuTu. Ma ọ bụ na ya na GeekBench na ndị ọzọ, ọ maara nke bụ smartphones kachasị ike nke June maka ndepụta nke Antutu Benchmark gosipụtara. Chọpụta ha!
Samsung mepere ụlọ ọrụ mmepụta ekwentị kacha ibu n'ụwa
Samsung mepere ụlọ ọrụ mmepụta ekwentị kachasị na ụwa. Chọpụta ihe banyere ebe a na-emepụta Samsung na India.
Filters na nsụgharị dị iche iche nke Xiaomi Mi A2
Versionsdị dị iche iche na agba nke Xiaomi Mi A2 ga-akụ ahịa na mbido ya na njedebe nke ọnwa abanyelarị.
Xiaomi ga-emeghe ụlọ ahịa ọhụrụ na Valencia na La Coruña
Xiaomi na-ekwuwapụta ụlọ ahịa ọhụrụ na Valencia na La Coruña. Chọpụta ihe banyere ụlọ ahịa ọhụrụ nke akara ndị China ga-abata na Spain.
E gosipụtara Xiaomi Mi Mix 3 ọnụahịa
E gosipụtara ọnụahịa Xiaomi Mi Mix 3. Chọpụta karịa maka ọnụahịa nke nsụgharị nke ekwentị Xiaomi ọhụrụ ga-enwe.
Ise egwuregwu kacha mma kacha mma maka gam akporo. Chọpụta nhọrọ a nke egwuregwu minimalist ị nwere ike iji na ekwentị gam akporo gị.
Otu esi ezopu faịlụ WhatsApp ebudatara na gallery gị
Nwere ike zoo zoo faịlụ ma ọ bụ onyonyo ebudatara na gallery nke ekwentị gị. Nke a ga - azọpụta gị ndọghachi azụ a na-atụghị anya ya.
Enwe Kindle Unlimited ruo ọnwa atọ maka euro 0
Amazon na-enye anyị onyinye magburu onwe ya nke na-enye anyị ohere ịnụ ụtọ Kindle Unlimited maka euro 0 maka ọnwa 3.
Ihe ngosi Honor 10 ga-abata na ihuenyo 6,9-inch
Ebu ụzọ edepụtara nke Honor Note 10. Chọpụta ihe ndị ọzọ banyere ọkọlọtọ ọhụrụ nke akara ndị China ga-ada ahịa na afọ a.
Enwere ike ịnye Xiaomi Mi Max 3 n’ọnwa a
Enwere ike igosi na Xiaomi Mi Max 3 na July. Choputa ihe banyere nbata nke igwe ohuru China n’abu ahia n’onwa a.
Samsung gosipụtara ikike inweta ihu ihu dị elu
Samsung ejirila usoro ihe eji achọpụta ihu ọma. Chọpụta ihe banyere patent ọhụrụ sitere na ụlọ ọrụ Korea.
OPPO patent atọ dị iche iche mpịachi ekwentị
OPPO emewo patenti atọ dị iche iche apịachi. Chọpụta ihe banyere patenti ọhụrụ nke akara ekwentị China foldable.
Akụkọ ifo Matrix ekwentị, Nokia 8110 dị ugbu a na Spain
Echiche ụgha sitere na Matrix, Nokia 8810 laghachi na ahịa site na ụlọ ọrụ Finnish mana n'ụdị dị ọnụ ala karịa.
LG ga-arụ ọrụ na ekwentị mpịachi
LG esesịn patented mbụ ya mpịachi ekwentị. Firmlọ ọrụ Korea na-arụ ọrụ na ekwentị mbụ ya na-arụ ọrụ, nke ha mere ka ọ bụrụ nke ọma.
Galaxy X na Galaxy S10 gbanwere ụbọchị ngosi ha
Agbanwela ụbọchị ngosi nke Galaxy X na Galaxy S10. Chọpụta karịa maka ụbọchị ọhụụ maka ụdị Samsung.
Xiaomi Mi MIX 3 ga-enwe igwefoto na-agba agba
Xiaomi Mi MIX 3 ga-enwe igwefoto na-agba agba. Chọpụta ihe maka atụmatụ ndị China maka iji sistemu a na ekwentị.
Vivo Z10, ngwaọrụ ọhụrụ nke ụlọ ọrụ ahụ ka na-eji Android Nougat
Naanị ụnyaahụ, Vivo mere ka anyị mata Vivo Z1i, nke dị n'etiti etiti bụ akụkụ nke katalọgụ nke ụlọ ọrụ China nke na-abịa na Qualcomm Snapdragon 636 SoC Zute Vivo Z10 ọhụrụ, otu etiti nwere ngalaba foto dị ịtụnanya site na nke anyị nwere ike inweta foto nke ogo ọkachamara maka igwefoto ya.
Alcatel 1 rutere Spain! Ahịa na nnweta nke gam akporo a
Ihe dị ka izu abụọ gara aga, Alcatel gosipụtara Alcatel 1 yana njirimara ya niile na nkọwapụta teknụzụ ya n'ụzọ nke na Alcatel 1 rutere Spain na ọnụahịa dị ọnụ ala nke 69.99 euro. Ọ ga-adị site na July 19. Kpoo gam akporo Go a!
Nwere ike iji Google Duo na ngwaọrụ gị niile na enweghị oke kaadị SIM
Site taa ị nwere ike iwunye Google Duo na ngwaọrụ mkpanaka gị ọ bụla nwere akaụntụ Google na-enweghị mmachi.
Xiaomi na-arụ ọrụ na smartphone maka United States
Xiaomi ga - amalite ekwentị naanị na United States. Chọpụta ihe banyere ọnụ ụzọ nke akara ndị China na ahịa ndị America.
Ihe ngosi 9 Galaxy ga-abata na agba ise
Samsung Galaxy Note 9 ga-adị na agba ise. Chọpụta ihe maka agba ndị ahọpụtara maka mmalite ahịa ha.
Ekwentị foldable nke Samsung ga-enwe batrị foldable
Ekwentị foldable nke Samsung ga-eji batrị enwere ike. Chọpụta ihe banyere batrị Samsung Galaxy X ga-eji.
Meitu MP1710 gafere TENAA ma ndị a bụ atụmatụ ya
Meitu, ụlọ ọrụ ndị China guzobere na 2008, yiri ka enweelarị ọdụ ọhụụ dị njikere n'ihi ụzọ ọ na-adịbeghị anya site na TENAA, onye na-achịkwa ya na The Meitu MP1710 nke TENAA ma gosipụta njirimara ya na nkọwapụta teknụzụ ya. Anyị mere ka ị mara
Meizu CEO kwuru na Meizu 16 ga-abata na mbubreyo July ma ọ bụ mmalite August
Ka ọ dị ugbu a, Meizu 16 bụ ngwa ọrụ kachasị atụ anya nke ụlọ ọrụ ahụ, na-ewepụta asịrị na ịkọ nkọ na-enweghị njedebe nke Jack Wong, onye isi oche Meizu, kwuru na Meizu 16 ga-abata na mbido Ọgọstụ a ma ọ bụ na ngwụcha ọnwa a. . Anyị na-agbasawanye gị!
Nyochaa Bluboo S3
Anyị nwalere Bluboo S3, ekwentị ndị China nwere igwefoto abụọ yana ihe ngebichi na-enweghị atụ. Chọpụta njirimara ya, uru ya na ọghọm ya. Ọ bụ ezigbo nhọrọ?
Otu ahụhụ na Vivo NEX na-eme ka igwefoto nwere ike iweghachite na-enweghị ịdọ aka ná ntị
N'oge na-adịbeghị anya, Vivo malitere Vivo NEX, njedebe dị elu na igwefoto nwere ike iwepụ nke kpochapụrụ mkpa nke ụlọ ọrụ ahụ iji mejupụta usoro ọkwa ama ama. Anyị na-agbasawanye gị!
Vivo Z1i: Ọkara ọhụrụ nke akara ndị China
Vivo Z1i: Nkọwapụta, ọnụahịa na mwepụta gọọmentị. Choputa ihe banyere udiri ohuru ohuru nke akara ahia ndi China nke a ga-ebido n'oge na adighi anya.
A ga-enye Huawei Nova 3 na July 18
Kwadoro: A ga-ewepụta Huawei Nova 3 na July 18. Chọpụta ihe banyere mwepụta nke ọhụrụ China ika ekwentị.
Android P Beta 3 na-enye gị ohere iji aka gị rụọ ọrụ ọnọdụ gbara ọchịchịrị
Beta nke atọ nke gam akporo P, na-enye anyị ohere iji aka rụọ ọrụ ọchịchịrị ma ọ bụ ọnọdụ ọkụ na-enweghị dabere na akwụkwọ ahụaja nke anyị wụnye.
Nkọwa mbu banyere Google Pixel Watch
Google Pixel Watch: Nkọwa izizi na ụbọchị ịhapụ. Chọpụta karịa Google's Wear OS smartwatch na-abịa ọdịda a.
Atụmatụ Huawei Nova 3 nke TENAA kpughere
Huawei enweela onye na-anọchi Nova 2, nke etiti ya malitere n'afọ gara aga, ọ bụkwa, n'ezie, Huawei Nova 3. Ngwaọrụ a abanyela na TENAA Huawei Nova 3 agabigala TENAA ma anyị amatalarị ya nhazi na isi ihe. Anyị na-agwa gị!
Beta nke atọ nke gam akporo P maka Google Pixel dị ugbu a
Beta nke atọ nke gam akporo P dị maka ndị ọrụ bụ akụkụ nke mmemme beta na ndị nwere Google Pixel
S-Pen nke 9 Galaxy Note ga-enye gị ohere ijikwa ekwentị
S-Pen nke Samsung Galaxy Note 9 ga-egosipụta Bluetooth. Choputa ihe banyere mgbanwe nke skulu di elu ga eweta.
Vivo V9 dị iche iche ji Qualcomm si SD660 SoC na 6GB Ram
Ihe dị ka ọnwa atọ gara aga, Vivo kwalitere Vivo V9, igwe na-adịkarị n’etiti nwere ezigbo agwa. Ugbu a, ụlọ ọrụ ahụ ka gbanwere Vivo V9 site na Qualcomm Snapdragon 660 processor na nnukwu 6GB RAM. Anyị na-ewetara gị ekwentị ọhụrụ nke ụlọ ọrụ ahụ kwalitere!
MIUI 10 Global Beta: ndepụta nke ekwentị Xiaomi nke ga-adaba na oge emelitere ha
Na mbido ọnwa, anyị gwara gị gbasara ndepụta gọọmentị nke Xiaomi nyere anyị nke pụtara na ngwaọrụ mkpanaka nke ga-abụ Xiaomi ekpugherela ndepụta ọhụrụ nke ngwaọrụ ndị dakọtara na MIUI 10 Global Beta. Mara ụbọchị emelitere ha!
Xiaomi ga-emeghe ụlọ ahịa ọhụrụ abụọ na Spain na July 7
Xiaomi ga-emeghe ụlọ ahịa ọhụrụ abụọ na Spain na July 7. Chọpụta ihe banyere ụlọ ahịa nke akara ndị China ga-emepe na Spain n'otu izu.
A na-agbapụta nkọwa dị iche iche na nkọwapụta teknụzụ nke Oppo A5
Oppo A5 apụtawo ìhè site na ụfọdụ ntụgharị. Ngwaọrụ a ga - abịa dịka ekwentị nke nkọwapụta etiti etiti. Na mgbakwunye, site na Oppo A5 a na-ahụ ya site na nsụgharị ya maka nkwụsị. Na mgbakwunye, anyị amataworị ụfọdụ njirimara ya. Anyị na-agbasawanye gị!
Sọpụrụ ga-akwadebe ihe kwesiri ekwesi 6.9-inch Honor Ravel dika leak
Huawei gaara arịọ usoro maka ogwe diagonal 6.9 nke anụ ọhịa dịka ozi leaked na network. Nke a na-egosi na mbupu ahụ Dabere na ozi a na-akọ, Huawei, site na enyemaka ya Honor, ga-ahụ onwe ya na-arụ ọrụ na Honor na 6.9 `` Super AMOLED panel.
Video Review Moto G6, «Nloghachi nke Eze»
Esi emechi ndị ọrụ nke otu mkparịta ụka na WhatsApp: ihe dị ọhụrụ na ngwa izipu ozi
Nwere ike ịhọrọ, ọ bụrụ na ị bụ onye nchịkwa WhatsApp, iji mechie ọnụ ụlọ niile nke otu nkata iji biputere ozi n'onwe gị.
Huawei kwupụtara nkenye nke teknụzụ GPU Turbo na ndepụta nke ngwaọrụ ndị a ga-akwado
Huawei kwupụtara ọkwa GPU Turbo teknụzụ tupu ọnwa a. Teknụzụ a, nke dabere na njikarịcha ngwanrọ na ngwaike, Huawei kwadoro nkenye nke teknụzụ GPU Turbo site na nwelite nke gụnyere Huawei na Honor phones.
Akụkọ Instagram ruru 400 nde ndị ọrụ kwa ụbọchị ma na-ewebata ihe mmado egwu
Ga-abụrịrị otu n'ime nde ndị ọrụ 400 kwa ụbọchị na-abanye iji lelee ma ọ bụ bupụta Akụkọ Instagram. Etinyekwara ihe mmado egwu ahụ.
Huawei ga-emelite ekwentị ya kwa ọnwa abụọ
Huawei kwere nkwa imelite ekwentị ya kwa ọnwa abụọ. Chọpụta ihe banyere nkwa ika imelite ya ngwaọrụ.
Huawei ga-ebido ekwentị 5G mbụ na June 2019
Ekwentị mbu nke Huawei nwere 5G ga-abata na June 2019. Chọpụta ihe banyere ekwentị a nke Huawei ji achọ 5G.
Motorola na-ekwupụta ihe omume maka August 2
Motorola ga ewebata ekwentị ọhụrụ n’abalị abụọ nke ọnwa Ọgọst. Chọpụta ihe banyere ụlọ ọrụ ahụ kwadebeere maka ọnwa nke Ọgọstụ.
Xiaomi rere nde 5 nke Redmi Rịba 5 na Redmi Rịba 5 Pro na India naanị ọnwa anọ
Xiaomi, otu n’ime ndị na-emepụta ekwentị mkpanaaka ise, jisiri ire ihe dị ka nde nde ise nke Redmi Note 5 na Redmi Note 5 ProXiaomi, ụlọ ọrụ ndị China, ekwuola na ọ jisiri ire nde nde ise nke Xiaomi Redmi Rịba 5 na Xiaomi Redmi Rịba ama 5 Pro na India.
Amazon na-ekwuputa mbadamba nkume ọhụrụ Fire HD 10 Edition Edition na "Ngosipụta Ngosipụta" maka Ọkụ nkịtị
Site na "Gosi ọnọdụ" ị nwere ike ịgbanye ochie gị Amazon Fire n'ime Echo Show na Alexa dị ka onye bụ isi protagonist. Amazon Fire HD 10 Editionmụaka Edition na-efu efu.
Sony iji mechie ọrụ na Middle East, Africa na Turkey na October
Sony ka amaara dị ka otu n'ime ụlọ ọrụ ama ama ama ama ama ama ama ama kemgbe amalitere. Nke a na-anọchite anya Sony ga-emechi ọrụ na Turkey, Africa na Middle East na ọnwa nke Ọktọba. Nke a bụ ihe Evan Blass kwuru. Anyị na-agbasawanye gị!
ISOCELL Plus: Nkà na ụzụ ọhụrụ nke Samsung iji melite foto na ọnọdụ ọkụ
Samsung ka webatara teknụzụ ọhụụ akpọrọ ISOCELL Plus. Nke a bụ mmelite nke ISOCELL etinyere na ihe mmetụta CMOS nke ụlọ ọrụ Samsung gosipụtara ka teknụzụ ọhụụ akpọrọ ISOCELL Plus. Nke a bụ nkwalite ISOCELL nke ụlọ ọrụ gosipụtara afọ ole na ole gara aga.
SUOP si 1 GB ọnụego ugbu a na ọnụahịa kacha mma
Nweta ego SUOP 1 GB ugbua nwere ego. Chọpụta karịa gbasara ọnụego a, yana ego iwepụtara mgbe ị na-akwụ ụgwọ ya ugbu a.
E gosipụtara ọnụahịa ire ere nke Xiaomi Mi Max 3
Xiaomi Mi Max 3 ga-enwe ọnụahịa mkpọsa nke yuan 1.699. Chọpụta karịa ọnụahịa nke ekwentị ọhụrụ nke akara ndị China ga-enwe.
Ekwentị Nokia kacha mma ga-abata na IFA 2018
Ekwentị Nokia kacha mma ka a ga-eweta na IFA 2018. Chọpụta ihe banyere ụdị ọhụụ nke ika ahụ ga-abata na ọkara nke abụọ nke afọ.
Xiaomi Mi A2 bụ onye Taiwan NCC kwadoro
Xiaomi yiri ka ọ nwere Xiaomi Mi A2 dị njikere, nke ọzọ n'etiti ụlọ ọrụ ahụ. Ngwaọrụ a, mgbe enwetara ya ikike na Singapore, NCC nwetara ya Xiaomi Mi A2. Na mgbakwunye, dị ka mbipụta e nyere na nnọkọ ụlọ ọrụ ahụ, a ga-ewepụta ya na July 24.
Meizu X8 ga-aka nke Xiaomi Mi 8 SE mma, ka CEO Jack Wong kwuru
Jack Wong, onye isi ọrụ Meizu, nwere obi ike na ike Meizu X8 ga-adị ike, ngwaọrụ ụlọ ọrụ na-esote, dị ka Meizu CEO Jack Wong si kwuo, Meizu X8 ga-aka nke ọhụrụ mma. 8 SE, Ngwaọrụ Xiaomi nwere Snapdragon 710.
EMEET Office Core 2 Nyochaa
EMEET Office Core 2 Smart Ọkà okwu na-enye ahụmịhe dị mma na-ege ntị, imewe pụrụ iche na nnwere onwe dị ukwuu
Ihe omume Xiaomi ohuru na July 24: Xiaomi Mi A2 biara
Xiaomi Mi A2 ga-egosipụta ya na July 24. Chọpụta karịa maka ngosi ụbọchị nke ika ọhụrụ ekwentị.
Snapdragon 632, 439 na 429: Ndị igwe nrụpụta ọhụrụ dị ọnụ ala
Snapdragon 632, 439 na 429: ndị nhazi ọhụrụ Qualcomm. Chọpụta karịa gbasara ndị nrụpụta ọhụụ a ruru ogo dị ọnụ ala.
LG V40 nwere ike ịnweta ese foto ise na mkpokọta
LG V40 ga - egosiputa kamera ise. Chọpụta ihe banyere ọhụụ ọhụrụ dị elu site na LG nke ga-azọ na nke kacha mma gbasara igwefoto.
Nkọwapụta na Akụkụ nke Mbadamba ụrọ iBall ọhụrụ 4G
iBall, ụlọ ọrụ na-enwechaghị mmata na ahịa gadget ụwa, amalitela iBall Akara 4G, mbadamba ohuru ya nke na-abịa na imepụta iBall amalitela mbadamba ọhụrụ ya ... Anyị na-ekwu maka iBall Akara 4G, ngwaọrụ nwere imewe na ụfọdụ mara mma jụụ atụmatụ.
Oukitel nzo na omenala maka Oukitel K8
Nsonaazụ ọzọ nke Oukitel ga-eweta bụ K8, ọnụ ya nwere omenaala ọdịnala, ihuenyo 6-inch na batrị 5000 mAh
Meizu's mBack anaghị aga n'agbanyeghị ụlọ ọrụ na-abaghị uru bezel
Igodo nnweta nke anụ ahụ nwere ndị na-agụ akara mkpisi aka bụ usoro nyocha nke ọtụtụ ndị ọrụ tupu Meizu ezubela ịghara ịhapụ teknụzụ mBack n'agbanyeghị ekwentị ndị na-abịanụ nke ga-abata na-enweghị mburu. Nke a bụ ihe onye isi ọrụ gosipụtara.
Akpadoro nkọwa ọhụrụ nke Xiaomi Mi Max 3
Xiaomi nwere ike ibuputa uzo abuo nke Xiaomi Mi Max 3. Choputa ihe ozo banyere uzo abuo nke ekwentị ohuru ya.
Dị iche iche na Nokia ụdị ga-ihu unlock kpọghee ekwt
Nokia ga-ebute ọtụtụ mmeghe nke ekwentị ya. Chọpụta ihe gbasara mmelite a na-abịa n'oge na-adịghị anya na ekwentị ndị a.
Samsung Galaxy S10 ga - abịa na ụdị ya na igwefoto atọ
The Galaxy S10 ga-enwe nsụgharị ya na igwefoto atọ. Chọpụta ihe banyere ọhụụ ọhụrụ dị na Korea na igwefoto ya nwere okpukpu atọ.
Gam akporo P Mmepụta Preview 3 ugbu a maka Nokia 7 Plus
Nokia 7 Plus, ị nwere ike ịwụnye beta nke abụọ nke Ngosipụta Mmepụta gam akporo P
Akpachapụtara nkọwa ndị mbụ nke Samsung na gam akporo Go
Samsung Galaxy J2 Core: Samsung mbụ gam akporo Go nlereanya. Choputa ihe banyere nkowa nke usoro a di ala,
Samsung agaghị eru ihe ahịa ya maka 2018
Ahịa Samsung ga-adị n'okpuru atụmanya. Chọpụta ihe banyere ụlọ ọrụ ahụ na-ere nke na-ada ada nke atụmanya.
Bethesda na-ewe Warner Bros n'ụlọ ikpe maka egwuregwu Westworld: ejiri Fallout Chebe koodu
Warner Bros na ndị okike Westworld wetara ikpe site na Bethesda maka iji koodu Fallout Shelter nke abụọ maka egwuregwu ọhụrụ ahụ.
Nokia X6 na-acha anụnụ anụnụ na-ebupụta na China
Nokia X6 malitere na China na agba ohuru ohuru. Chọpụta ihe banyere ụdị ekwentị nke amalitegoro na China.
Samsung ejirila gam akporo Go nwalee ekwentị izizi ya
Samsung mbụ nwere gam akporo Go dị na nyocha. Chọpụta karịa gbasara ule ndị ika ahụ ji ekwentị a eme.
Njirimara nke Sony Xperia ọhụrụ na-ẹdụk na net. Ọ ga - abụ XZ3 Premium?
Awa ole na ole gara aga, ụfọdụ data sitere na Sony Xperia ọhụrụ na ihuenyo ngosi nke 18: 9. Dabere na nseta ihuenyo e bipụtara, ihe ọhụrụ Sony Xperia dị egwu abanyela n'ịntanetị n'okpuru akara ngosi 'H8616'. Anyị na-eme ka ị mara nkọwa!
Nyochaa Elephone A4, ọnụ ala nke ihe na-erughị 100 Euro dị ezigbo mma
Meizu X8: mobile na-esote ụlọ ọrụ ga-abịa na SD710 dị ka onye isi ụlọ ọrụ ahụ kwuru
The Chinese ika, dị ka anya, e-elekwasị anya naanị na Meizu 16 na 16 Pro, ọzọ abụọ elu-ọgwụgwụ ga-kụrụ ahịa n'ime Meizu CEO Jack Wong ka a mara ọkwa site na ụlọ ọrụ ukara forum na Ha na-arụ ọrụ na Meizu X8, ma o gha bia SD710.
Huawei amaliteworị ịrụ ọrụ na Kirin 1020 processor ya
Kirin 1020: Ngwaọrụ Huawei maka njedebe dị elu. Chọpụta ihe ndị ọzọ gbasara ihe nhazi ọhụụ nke ika China maka ọhụụ ọhụrụ ya.
Nokia X6 nke mba ụwa gosipụtara na webụsaịtị nke ụlọ ọrụ ahụ
Nokia X6 gosipụtara na webụsaịtị gọọmentị nke ụlọ ọrụ ahụ. Chọpụta ihe banyere ọchịchị na ekwentị maara ẹkedori mba.
Instagram eruola ndị ọrụ 1.000 nde
Instagram eruola ndị ọrụ 1.000 ijeri. Chọpụta karịa gbasara ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ ndị netwọkụ mmekọrịta nwetagoro.
A ga-enye Xiaomi Mi Pad 4 nke a na-esote June 25
Na mgbakwunye na ngosi nke Redmi 6 Pro nke ga-ewere ọnọdụ n'ime ụbọchị ise na China, ụlọ ọrụ ahụ ga-eweta mbadamba nkume ọhụrụ ya, Xiaomi ga-ebupụta mbadamba ọhụrụ ya na June 25 a na-esote. Anyị na-ekwu maka Mi pad 4, onye nọchiri Mi Pad 3
Nweta ọnụ ọgụgụ a na-apụghị ịgbagha agbagha nke Pepephone na data mkpanaka ndị ọzọ
Ọnụ ọgụgụ a na-apụghị imeri emeri nke Pepephone ugbu a na-enwekwu mobile data. Were nkwalite a pụrụ iche nke ọnụego ndị ọrụ kacha mma, ugbu a jiri data ndị ọzọ.
Enwe ike Hardcase H500S: ekwentị ọhụrụ siri ike sitere na ụlọ ọrụ na batrị 3000mAh
Energizer, onye ama ama ama nke batrị, ọkụ ọkụ na ngwaọrụ ndị ọzọ, ewepụtala ekwentị ọhụrụ elebara anya, karịa enEnergizer gosipụtara n'oge na-adịbeghị anya Energizer Hardcase H500S, ekwentị mkpirisi siri ike nke nwere obere ntakịrị ihe na batrị 3000mAh.
A na-enyocha ihu ihu nke Galaxy Note 9 na-akwado na Samsung gafere ọkwa ahụ
Ihu panel nke Galaxy Note 9 abanyela na dịka anyị nwere ike ịtụ anya, ọkwa ahụ apụtaghị na ọkwa Galaxy
The Xiaomi Redmi 6 Pro ga-eweta na June 25
A ga-egosi Xiaomi Redmi 6 Pro na June 25. Chọpụtakwuo banyere ụbọchị ngosi nke ọhụụ ọhụrụ nke akara ngosi ndị China.
Xiaomi Mi 8 ga-ebido na Spain na August
Xiaomi Mi 8 ga-abata na Spain n'ọnwa Ọgọst. Chọpụta ihe banyere mwepụta nke elu-akara nke ika China na mba anyị.
OPPO Find X price na ntọhapụ ụbọchị ekpughere
Anyị amaraworị ọnụahịa na ụbọchị mmalite nke OPPO Find X. Thedị ahụ mechara kpughee ọnụahịa nke ọhụụ ọhụrụ ya na mmalite ya na Europe.
Sony Xperia XZ3 leaks na GFXBench
Sony yiri ka enweelarị Sony Xperia XZ3 dị njikere, ọkọlọtọ ya na-esote nke ga-abata yana ọtụtụ atụmatụ na nkọwapụta teknụzụ na, na-enweghị Sony Xperia XZ3 ka pụtara na GFXBench yana ọtụtụ atụmatụ ya na nkọwapụta teknụzụ. Anyị na-akọwa ha niile!
Samsung ga - eweputa GPU nke ya
Samsung ga - ewepụta GPU maka ekwentị ya. Chọpụta karịa gbasara mkpebi ụlọ ọrụ ahụ iji mepụta GPU nke ya maka mbadamba na smartphones.
Xiaomi ga-emeghe ụlọ ahịa ọhụrụ na Madrid n'izu a
Xiaomi ga-emepe ụlọ ahịa ọhụrụ ya na Madrid na Satọde a. Chọpụta ihe banyere oghere nke ụlọ ahịa ọhụrụ nke China na mba anyị.
Motorola ewebata Ngwọta maka ekwentị ekwentị
Motorola ga-edozi nrụrụ nke ihe ngebichi. Chọpụta ihe ndị ọzọ banyere ụlọ ọrụ mbụ ngwọta maka mpịachi igwe.
Egwu YouTube mechara rute Spain taa
Egwu YouTube rutere mba 17 gụnyere nke anyị iji nwee ọ videosụ vidiyo egwu ad-na-enweghị mgbasa ozi na ike igwu egwu na ndabere.
8845 M5 Titanium pụtara na TENAA nwere atụmatụ yiri nke onye bu ya ụzọ
8848 bụ ụlọ ọrụ China nke amaara maka ịmalite igwe dị oke ọnụ ma bụrụ nke mbụ nwere atụmatụ enweghị atụ. Ekwenti ohuru nke 8848 M5 Titanium weputara ka TENAA kwadoro ya tinyere ọtụtụ atụmatụ na nkọwapụta nke na-eme ka ọ dị ka onye bu ya ụzọ. Anyị na-agwa gị!
MyGica ATV1960 Nyochaa: Ike di na iwu gi !!
Wepu ego na ụbọchị ntọhapụ nke Xiaomi Mi A2
Xiaomi Mi A2: Ahịa ma wepụta ụbọchị leaked. Chọpụta karịa maka atụmanya ahịa maka ọhụụ gam akporo Otu ekwentị.
Moto C2 ga-abụ ekwentị Motorola mbụ nwere gam akporo Go
Moto C2: Motorola ekwentị mbụ na gam akporo Go. Chọpụta ihe banyere ekwentị ọhụrụ ahụ nke ga-ada na njedebe dị ala.
Ihe ngosi 9 Galaxy Note ga-abata na ụdị nke nchekwa 512 GB
Ihe ngosi 9 dị na Galaxy ga-enwe nsụgharị na 512 GB nke nchekwa. Chọpụta ihe banyere ụdị ọhụụ nke ga-abịa site na njedebe dị elu.
Xiaomi Redmi 6 na 6A agaghị enwe ihe mmetụta infrared
Xiaomi Redmi 6 na 6A agaghị enwe ihe mmetụta infrared. Chọpụta ihe banyere mgbanwe ga-eme na ekwentị abụọ nke akara ngosi China.
Nyochaa YI-Cloud Dome Camera 1080P
Zute YI-Cloud Dome Camera 1080P, igwefoto wifi nwere mkpebi HD zuru oke nke ị nwere ike ijikwa site na ekwentị gị yana ọtụtụ ngwa ọrụ karịa ka ị nwere ike iche n'echiche.
OPPO Find X imewe ekpughere na ọkwa ohuru
Nhazi nke OPPO Find X esesịn a kpamkpam leaked. Chọpụta ihe banyere nhazi nke ọhụụ ọhụrụ dị elu nke akara ndị China ga-enwe.
Vimble 2, Gimbal dị elu, ọkachamara dị nso maka naanị € 99
Vimble 2, Gimbal ọkachamara nke nwere ike ịbụ nke gị naanị euro 99 site na iji coupon ego naanị maka Androidsis
Chuwi LapBook Ikuku
Chuwi LapBook Air 2018, laptọọpụ nwere ọmarịcha ihe eji achọta na Macbook Ikuku na anodized aluminum rụchara na ultra-thin body.
Nyochaa TV Igbe ABOX A4
Video Review TV Igbe nke ika ABOX nlereanya A4 na 2 Gb nke Ram ebe nchekwa na ya 16 Gb nke esịtidem nchekwa na a asịrị price.
Igbe: vlanahụ mepụtara nyochaa: evolushọn ma ọ bụ retrograde?
Igbe dị ndụ echekwara bụ ebe a na gam akporo, mana ọ kachasị kachasị mma ka ịnwee ya na mkpanaka? Anyị ga - eme ka ị ghara inwe obi abụọ.
Nweta Huawei Y7 2018 n'efu na ọnụego na-adịghị agwụ agwụ nke Yoigo
Nye: Ọnụ ego na-adịghị agwụ agwụ nke Yoigo na Huawei Y7 2018 n'efu. Chọpụta karịa maka nkwalite a ị na-enweta ngwaọrụ n'efu.
Ndị injinia OUKITEL na-agbasi ike: njikere iji bulie OUKITEL K7 na batrị 10.000mAh
Na June 19 ị nwere ike ịzụta OUKITEL K7 na batrị 10.000mAh ya na ire ere zuru ụwa ọnụ mbụ. Nwere ike ịchekwa $ 30 na a dere.
Edechara Meizu 16 na 16 Pro, akara ngosi ọhụụ ọhụrụ
Meizu 16 na 16 Pro: Nkọwapụta, imewe na ọnụahịa leaked. Chọpụta ihe banyere ọhụụ ọhụrụ dị elu nke akara ndị China nke ga-abata n'August.
%% Nyocha vidiyo zuru ezu tinyere raffle nke okwu Bluetooth ọhụrụ Energy Sistem, Energy Music BOX 5+ YALL Edition%
Google Play na-enye ndị mmepe ohere ịme nkwụghachi maka ịzụrụ ihe n’ime ngwa
Chọpụta karịa ihe ọhụụ Google Play na-eme iji mee ka ọ dịrị ndị ọrụ mfe ịzaghachi ịzụrụ ihe na ndenye aha ha.
Mmelite ohuru nke Nokia X6 na - enye gi ohere izoputa ihe omuma a
Nokia X6 na - enye gị ohere izochi ọkwa ahụ na mmelite ọhụrụ ya. Chọpụta ihe banyere ụzọ ọ ruru ekwentị ekele nke ọkwa nwere ike zoro.
Ford na-emepụta jaket mara mma maka ndị na-agba ịnyịnya ígwè
Otu ìgwè ndị ọrụ Ford mepụtara jaket mara mma nke na-ahụ maka ịgbasa ozi ndị ọrụ nwere ike inye ndị ọkwọ ụgbọala.
Ekwentị mpịachi Samsung ga-efu euro 1.600
Chọpụta karịa ọnụahịa nke Galaxy X, ekwentị foldable Samsung na-arụ ọrụ, ga-eweta mgbe ọ kụrụ ụlọ ahịa. Ọ ga-adị oke ọnụ.
Etu esi lelee egwuregwu niile nke asọmpi iko mba ụwa 2018 na Russia n'efu
Vivo Nex: Ekwentị ọhụụ nke ụlọ ọrụ ahụ na ihe eji eme ihe ngosi Ultra FullView
N'ime awa ole na ole gara aga, Vivo kwupụtara Vivo Nex n'ụdị atọ dị iche iche, ọnụ ọhụụ ọhụrụ nke ụlọ ọrụ ahụ rutere mgbe e gosipụtara VivoVivo ka kwuputara Vivo Nex n'ụdị atọ dị iche iche, ekwentị ọhụrụ nke ụlọ ọrụ ahụ rutere mgbe ngosi nke Vivo Apex na MWC.
Oppo na-akwado njirimara nke Find X
Anyị na-agwa gị nkọwa niile nke Oppo ka gosipụtara banyere Find X
Huawei na-atụ anya ire ekwentị nde 200 n'afọ a
Huawei chọrọ ire ihe karịrị ekwentị 200 na 2018. Chọpụta ihe banyere ebumnuche ahịa nke akara ndị China.
Xiaomi Mi Max 3 ka akwadoro na China
Xiaomi Mi Max 3 ka akwadoro na China. Chọpụta ihe gbasara asambodo ekwentị, nke anyị ji mara nkọwa ya.
Blackview P10000 Pro nyocha
Blackview P10000 Pro nwere otu nnukwu batrị na ahịa, yana yana 4 GB Ram, yana ọmarịcha Sony igwefoto abụọ
Ekwenyere Nokia X6 International Version na Taiwan
HMD Global malitere Nokia X6 ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ọnwa gara aga na China, kemgbe ahụ, ngwaọrụ a enweela ihe ịga nke ọma na ire ere, na-achịkwa ka a ree ya Nokia X6 bụ onye Taiwanese NCC kwadoro, nke mere na ebidolarị mmalite ya hazie na mpaghara China n'ime ụbọchị ole na ole.
Nokia X6 na-ere ọzọ na China
Nokia X6 rerekwa ọzọ na ire ere ohuru ya na China. Chọpụta ihe banyere ihe ịga nke ọma nke ika n'etiti-nso na-enwe na ya igba egbe.
Filters ahịa na a video nke Vivo Nex
Ọnụahịa nke ọhụrụ Vivo NEX abanyelarịrị. Chọpụta karịa gbasara ọnụ ahịa ekwentị ọhụrụ nke akara ndị China ga-enwe.
Google Pixel 3 ga - eji ugwo ikuku
Google weputara ugwo ikuku na ihe ohuru ohuru. Chọpụtakwuo ihe ọhụrụ maka ịmebata n'ọgbọ na-abịa.
ZTE ruru nkwekọrịta iji nọgide na-arụ ọrụ n'ahịa
ZTE ruru nkwekọrịta na United States iji rụọ ọrụ ọzọ. Choputa ihe banyere nkwekorita nke onye mmeputa nke China ruru.
myTuner Radio, ụzọ kachasị mma iji gee ọdụ ọdụ kachasị amasị gị na ama gị
Ngwa myTuner Radio bụ otu n'ime ngwa kachasị mma, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ngwa kachasị mma iji gee ụlọ ọrụ kachasị amasị anyị na ịntanetị. Ibudata ma nwalee ngwa a site na itinye ebe a.